Mbeu nyowani yekugadzirwa kwesitashi ichavhurwa muUkraine - "Potato System" magazini
Mbeu nyowani yekugadzirwa kwesitashi ichavhurwa muUkraine
в nhau, Kudzokorora
MunaSeptember, dongo-isina starch yekugadzira chirimwa ichatanga kushanda pahwaro hweCPG Ukraine muLviv mudunhu. Iyo kambani inoiisa seyazvino kwazvo uye yakasvibirira yerudzi rwayo munyika, zvinoenderana neSEDEDI.
Iyo inogadzira mbatatisi inogadzira zvakare inogadzira mapuroteni uye fiber kuwedzera kune starch. Iyo purojekiti chikamu cheGreen Planet chirongwa, icho chiri kuitwa nerutsigiro rweUSAID Yemakwikwi Ehupfumi hweUkraine Chirongwa.
Sekureva kwaYuriy Pulgun, Development Director weCPG Ukraine, iyo kambani inoshandisa matekinoroji matsva ekugadzira, ayo anomhanyisa maitiro uye nekuchengetedza zviwanikwa.
“Kazhinji mbatatisi dzinoendeswa kufekitori, dzoshambidzwa dzorongwa ipapo. Tichashandisa yakakosha nharembozha iyo yatinogezesa nekugadzirisa mbatatisi mumunda. Ichasvika kune iyo bhizinesi yatove yakachena uye yakagadzirira kumwe kugadzirisa. Naizvozvo, chirimwa pachacho chinoshandisa mvura shoma uye kudiwa kwekubvisa ivhu kuchanyangarika, ”inodaro nyanzvi.
Tags: mbatata starch kugadzirwaUkraine
Anopfuura makambani matsva makumi mapfumbamwe atojoina YUGAGRO 2021